Backpack Deluxe - B
Kushambadzira Kufamba Chibhegi chine inoyevedza B-shape Banner iyo inobvumira nzvimbo hombe yekuti iwe ugadzire uye kudhinda meseji ikareruka, inodhura inoshanda inotakurika inotakurika maturusi ekusimudzira uye kushambadza mhando yako, chigadzirwa kana sevhisi paunenge uchifamba pane chero chiitiko chemukati kana chekunze uye. mukati memapoka makuru.
Applications:Indoor & Outdoor Advertising, Shows, Exhibitions, Zviitiko, Fairs, Promotions, Michato, Mapati, Matanho, Concerts etc.
Shandisa imwechete deluxe bhegi, huremu huremu hwakaumbwa 3D-foam kumashure pani ine cushion uye mhepo inoyerera chiteshi dhizaini, tambo dzinochinjika, inopa yakasununguka kushandisa ruzivo.homwe yepadivi uye ine zippered compartment ichikubatsira kuchengeta chinwiwa uye mapepa ekushambadzira, ichikusiya uine maoko emahara.
Mapango ese nemabhena anogona kurongedzerwa mubhegi kuitira kutakura nekuchengeta zviri nyore
Iyo yakasarudzika B yakavezwa mureza inopa yakasarudzika yekumaka mukana.Kuti upfeke bhegi rekushambadza mbozha rine tsika yemifananidzo banner pazviitiko kana mumhomho, iwe uchave nzvimbo yekutarisisa.
(2) Chiremba uremu Yakaumbwa 3D-furo kumashure pani ine cushion uye inobvumira kuyerera kwemhepo dhizaini dhizaini, inopa yakasununguka kushandisa ruzivo.
(3) Imba ine zipper uye mamwe mahomwe anopa imwe nzvimbo yekusunungura maoko ako.
(4) Bhandi rinogadziriswa rinodzivirira bhegi kubva pakuzendamira shure mumhepo ine simba.
(5) Hook dhizaini pamabhandi emabhodhoro emvura
(6) Oxford zvinhu zvinoita kuti bhegi rinyanye kuomarara uye kugara kwenguva refu kushandiswa.
(7) Pole mucarbon composite fiber, simba repamusoro uye rakasimba kupfuura aluminium kana plastiki zvinhu
Item code Flag Size Kurema Kurongedza saizi
BBX-B 82cm*46cm*2pcs 1.2KG 54*30.5*5.5CM
Tsvaga zvimwe zvedumireza yebhegi / Street Rucksack banner ormureza hardware
Zvakapfuura: Backpack HDPE
Zvinotevera: Backpack Deluxe – Bhora